नमस्ते भन्ने कि नमस्कार ? - DURBAR TIMES
HomeCulture & Religionनमस्ते भन्ने कि नमस्कार ?
डा. भवानीशङ्कर भट्टराई | ‘नमः’ शब्दकाे को शास्त्रीय अर्थ जोडिएका दुई हात निधारमा पुर्‍याई शिरलाई अलिकति झुकाएर गरिने अभिवादन हाे । जसलाई सामान्यतः नमनः, प्रणाम, अभिवादन, नमस्ते, नमस्कार आदि भन्ने गरिन्छ । नमस्तेमा उत्तरोत्तर विशिष्टता थपिँदै जाँदा क्रमशः पादस्पर्श र साष्टाङ्गदण्डवत् हुन्छन् । यही नमस् पदमा तिमीलाई भन्ने अर्थ बताउने ते (सर्वनाम) जोडिएपछि नमस्ते बन्दछ । अतः नमस्तेको अर्थ हुन्छ–तिमीलाई नमस्कार । त्यस्तै नमस् पदमा भावार्थक कार जोडिएपछि नमस्कार शब्द बन्छ, यसले पनि नमनको भाव बताउँछ । यी दुवैले सामान्यतः ठुला मानिस र ईश्वरप्रति गरिने, अभिवादन, सम्मान, नमस्क्रिया आदि शिष्टाचार बताउँछन् ।
नमस्ते र नमस्कारमा कुन जेठो होला भनी खोजी गर्दै जाँदा हामी वेदसम्म पुग्न सक्छौं । त्यहाँ देवतालाई अभिवादनका लागि नमस्ते शब्दको प्रयोग गरिएको पाइन्छ, जस्तै नमस्ते रुद्रमन्यव…(शुक्लय.१६(१), नमस्ते हरसे शोचिषे…(शुक्लय.३६(२०) आदि । वेदमा मात्र होइन उपनिषद्, ब्राह्मणग्रन्थ र विभिन्न पुराणहरूमा समेत देवी देवताहरूलाई वन्दना, स्तुति, अभिवादन, आराधना, प्रार्थना आदि अर्थमा जतासुकै नमस्ते सम्बोधन गरिएको पाइएतापनि तत्समानार्थी नमस्कार चाहिँ एकाध ठाउँबाहेक भेट्न सकिएन । नमस्तेको यही प्राचीनता र वैदिकतालाई समातेर आर्यसमाजका अनुयायीहरू विश्वको सर्वप्राचीन, सर्वोत्तम र निर्विकल्प अभिवादन नमस्ते नै हो भनी तर्क गर्दछन् ।
त्यसो भए भेटमा के भन्ने होला भन्दा उनीहरू तर्क गर्छन्–आर्यसंस्कृतिमा उदाउँदै गरेका सूर्यलाई नमस्कार गर्ने चलन छ, जुन योगमा पनि सूर्यनमस्कार मुद्राका नामबाट प्रसिद्ध छ, यो हाम्रा लागि आदर्श हो, त्यसैले भेटमा नमस्कार भन्नु शास्त्रसम्मत हुन्छ । यसरी नमस्तेलाई जबर्जस्ती अथ्र्याउने प्रयास गरिएको भए पनि माथिको प्रक्रियाबाट नमस्ते शब्दको निर्माण असम्भव देखेर होला भाषाविद्हरू भने शब्दनिर्माणको उक्त प्रक्रियालाई ठाडै अस्वीकार गर्दछन् ।
व्याकरणका सूत्रले नमस्ते शब्दको निर्माण जसरी गरून्, नमस्तेमा आएको सर्वनाम अनादरवाची वा जेसुकै होस्, नेपाली समाज भने नमस्तेलाई नै बढी रुचाउँछ । बिहानै रेडियो-एफएम खोल्यो, शुरुमा नमस्ते नै सुनिन्छ, शुरुमा मात्र होइन अन्त्यमा पनि प्रस्तोताहरू नमस्ते नै भन्दछन् । नेपाली तथा हिन्दी टिभीका मनोरञ्जन कार्यक्रममा यसो रिमोट घुमायो, त्यहाँबाट पनि नमस्ते नै खानुपर्छ । तै सभासमारोहका भाषणबाज र प्रस्तोताहरू चाहिँ नमस्कार भन्छन् कि भनेर उनीहरूलाई सुन्न घाममा घण्टौं पर्खियो, उनीहरू पनि मुखबाट फुत्तै नमस्ते नै निकाल्छन् ।
विद्यालयका कक्षामा चाहिँ नमस्कार सुन्न पाइन्छ कि भनेर ठाँटसँग छिर्यो, विद्यार्थीहरू ‘नमस्ते सर !’ भनिहाल्छन् । आफूले स्नेह गर्नुपर्ने मानिसका घरका ढोकामा पुगेर भित्र को छ हँ ? भनेर प्रश्न तेर्‍स्यायो, भित्रबाट निस्कने पात्रले जम्लाहात गर्दै हत्त न पत्त भनिहाल्छ– नमस्ते । होटल रेस्टुरेन्टमा छिर्यो, रिसेप्सनिस्ट र वेटरले व्यापारिक मन्द मुस्कानबीच फुत्त निकाल्छन्–नमस्ते हजुर । प्लेनमा पस्यो, त्यहाँका तन्नेरीहरू आफ्ना दुई हात चिउँडोसम्मै पुर्याएर साना बच्चालाई पनि नमस्ते भनिहाल्छन् । शास्त्रले जेसुकै भनोस्, परम्परा जेसुकै होस्, हाम्रो समाज सामूहिक सम्बोधनमा, व्यक्तिगत शिष्टाचारमा, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भेटघाटमा नमस्ते शब्दकै प्रयोग गर्छ । लोकलाई व्याकरण चाहिएको छैन, उसलाई त उच्चारण गर्न सरल, मिठो, चकलेटजस्तै गुलियो र बालकदेखि वृद्धसम्मले मन पराउने सरल र चुस्त (स्लिम) शब्द चाहिएको छ । त्यस्तै शब्दमध्येको एउटा हो नमस्ते पनि । लोकलाई नमस्कार लामो, गह्रुङ्गो, झन्झटिलो, शास्त्रीय र अप्ठ्यारो भएको छ, त्यसैले यो विस्तारै जनमानसबाट टाढिँदै गएको हुनसक्छ ।
गह्रुङ्गो भो भन्दैमा नमस्कार शब्दको प्रयोग पटक्कै हुँदै नहुने चाहिँ होइन, भारतीय अभिनेता अमिताभ बच्चन सोनी टिभीबाट कार्यक्रम प्रसारण गर्दा शुरु तथा अन्त्यमा नमस्कार भन्छन्, नेपाली टिभीका समाचार वाचकहरू नमस्कार भनेरै समाचार शुरु गर्छन् । विद्वान्हरू पनि सम्बोधनमा प्रायः नमस्कार नै प्रयोग गर्छन् । त्यस्तै प्राज्ञिक र भाषाविद्हरू पनि नमस्कारलाई नै अधिकतर चलाउँछन् । यी दुईको तुलनाबाट पनि नमस्कार एवम् नमस्तेका प्रयोगकर्ता र क्षेत्र फरक छन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ, अर्थात् लोक नमस्तेलाई चुस्त दुरुस्त र तन्दुरुस्त देखेर मन पराउँछ भने विद्वत्वर्ग चाहिँ नमस्कारलाई शास्त्रीय, शुद्ध तथा सात्विक मानेर प्रयोग गर्न रुचाउँछ । यी दुवैमा आ-आफ्नै तर्क छन्, दम छन्, मिठास छन् अनि सौन्दर्य छन् । लोक भन्छ– शुद्धाशुद्धि, मान–अपमान जेसुकै होस्, बुझ्नुपर्ने भाव हो, यो बुझिएकै छ, नमस्ते हजुर भन्दा कसैले पीठ फर्काएको आजसम्म पाइएको छैन भने अरूले किन विवाद गर्नु ? भाषाविद्हरू कुर्लिन्छन्–अशुद्ध उच्चारण गरेकाले वृत्रासुरले मर्नुपर्यो, त्यसैले अशुद्ध र भावदूषित शब्द पटक्कै उच्चारण नगर्नू…।
नमस्ते र नमस्कार दुवै श्रद्धाका विषय हुन् । तसर्थ लिने र दिने दुवैमा श्रद्धा छ-छैन यो चाहिँ अधिक महत्वपूर्ण कुरा हो । लिनेले श्रद्धापूर्वक लिएन वा दिनेले पनि श्रद्धापूर्वक दिएन भने नमस्ते, प्रणाम, दर्शन, चरणस्पर्श, साष्टाङ्गदण्डवत् कुनैको पनि काम छैन । त्यसकारण नमस्ते मनोविज्ञानमा श्रद्धा बढी महत्वपूर्ण देखिन्छ । अर्को कोणबाट हेर्ने हो भने नमस्ते चाकडी मनोविज्ञान पनि हो । गतिशील मानिस जब कुनै अलभ्य वा दुर्लभ कुरालाई प्राप्त गर्ने उद्देश्य राख्छ तब नमस्तेलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गरिरहेको हुन्छ । यसबाट हजारौं मानिसले आफ्ना इष्टदेवलाई रिझाएका पनि छन् । यहाँ नमस्ते भन्यो कि नमस्कार महत्वपूर्ण हुँदैन, श्रद्धा र चाकडी चाहिं मुख्य बन्छ ।
Previous articleकाे हुन् टिकटकमा सबैभन्दा बढी फलाेअर भएकी यी युवती ? कति छन् फलाेअर
Next articleदोलखा भीमसेनलाई पसिना आयो !